Amnesty International Itoophiyaan Oromoota hidhaman hunda haalduree tokkoon maletti akka gadi lakkiftu gaafate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Amnesty International Itoophiyaan Oromoota hidhaman hunda haalduree tokkoon maletti akka gadi lakkiftu...
Amnesty International Itoophiyaan Oromoota hidhaman hunda haalduree tokkoon maletti akka gadi lakkiftu gaafate
Amnesty International hawaasni addunyaa mirga oromoo ajjeefamuu fi hidhamuu jalaa baraaruuf dhiibbaa barbaachisu hunda Itoophiyaa irra akka kaayuuf waamicha dhiyeesseera.
Mootummaan Itoophiyaa Oromoota hiriira mormii irratti hrimaatan kumaatamatti laakkawaman, angawoota paartii KFO fi gaazexeessittoota dabalatee, daandii fi mana isaaniitii guuraa hidhatti darbe hunda haalduree tokkoon maletti gadi lakkisuu qaba, jedha Amnesty International. Namoonni hidhaman gidiraa fi hubaatii addaddaaf saaxilamuus ibsa gabaasni Amnesty International (AI).
Erga hiriirri mormii Oromiyaa Sadaasa 12, 2015 eegalee kaasee namoonni dhibba heddutti laakkayaman bifa suukkanneessaadhaan ajjeefamuu fi kumaatamni madaayuu raga baye AI.
Hawaasni addunyaa angawoota KFO, gaazexeessitootaa fi namoonni hidhaman hundi haalduree tokkoon maletti mootummaan Itoophiyaa akka gadi lakkisuuf dhiibbaa barbaachisu akka godhu gaafate. Mootummaan Itoophiyaa ummata nagaa irratti tankaarfii garajabeenyaa fudhachuu irraa akka dhaabatuu fi gaa’gama hanga ammaatti gayes qaamni wolaba ta’e qoratee kanniin yakka raawwatan seeraaf akka dhiyaatan godhuu irratti hawaasani addunyaa tattaafii cimaa godhuu qaba jedha AI.
Hawaasnii addunyaa jechuun dhaabbiileen mirga namaaf falmanii fi biyyoonni Dhihaa gocha mootummaa Itoophiyaa balaaleffachaa fi dhiibbaa irratti godhaa jiru. Mootummaan garuu gochaa badii raawwatame waakkachuu, xiqqeessee dhiheessuu fi tasgabbiin deebi’eera jechuudhaan milquuf tattaafii godhutti jira; hanga ammaatti itti milkaayuu dhabus. Mootummaan Oromoo qulqulluu ajjeese kan qabamuu fi deeggarsi dabalataa hawaasa addunyaa biraa kan qabsoo oromoon eegaleef argamu yoo Oromoon gaafii mirgaa fi haqaa eegale cimsee itti fufe qofa ta’uu beektonni dhimma Oromiyaa keessatti adeemaa jiru duukaa bu’an kan dubbatan.
ajjeechaa mootummaa itoophiyaa
ibsa human rights watch
Previous articleUmmata beelaye du’a jalaa baraaruuf gargaarsa biliyoona $1.4 tu Itoophiyaa barbaachisa
Next articleAmmatti boba’aa fi anniisaa Habashoota/ESAT irratti galaafannu qabnaa?